သရဏဂုံ သုံးပါးကို…. အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော… ပုဂ္ဂိုလ် ….ရရှိနိုင်သော…အကျိုးတရားများ – ရှအေလငျး
သရဏဂုံ သုံးပါးကို…. အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော… ပုဂ္ဂိုလ် ….ရရှိနိုင်သော…အကျိုးတရားများ
သ ရ ဏ ဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါ အကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သွားလေရာ အရပ်တိုင်း၌လေးစားမြတ်နိုးခြင်းခံရမည်
၂ ။ တိ က္ခပညော။ ဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်မည်။
၃။ သေ ဗ္ဗ ဒေဝါနုဝတ္တန္တိ။ နတ်တို့၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းခံရမည်
၄။ အ မိ တဘောဂံ လဘာမဟံ။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေမည်
၅။ သု ဝ ဏ္ဏဝဏ္ဏော သဗ္ဗတ္ထ။ ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်း၌ ရုပ်အဆင်းအလွန်လှပမည်
၆။ ပဋိကန္တော ဘဝါမဟံ။ ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်း၌ လူချစ်လူခင် အလွန်ပေါမည်
၇။ မိတ္တာနံ အစလော ဟောမိ။ ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်း၌ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မြဲမည်
၈။ ယသော အဗ္ဘုဂ္ဂတော မမံ။ ဖြစ်လေရာ ဘဝတိုင်း၌ လူအများ၏ လေးစားခြင်းခံရမည်။ ကောင်းသောစကားများကိုသာပြောကြမည်။
ကောင်းသတင်းများသာကျောဇောလိမ့်မည်ဟု တိသရဏမထေရ် ရဟန္တာအရှင်မြတ်က ဟောကြားခဲ့သည်
ဒီဃနိကာယ်(နှာ-၃၃၂) သံယုတ္တနိကာယ်(နှာ-၃၄၁) တို့၌ လာသော သရဏံ၏အကျိုးတရားများမှာ
၁။ ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ ကျရောက်ဆဲ ကျရောက်လတ္တံ့သော အန္တရာယ်များရှိခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ အပါယ်လေးပါးသို့ လားရောက်ရခြင်းစသည် တို့ကို တားမြစ်ဖျက်ဆီးပေးတတ်၏။
၂။နောင်ဘဝ နတ်ပြည်သို့ ရောက်သည့်အခါတွင်လည်း သရဏဂုံ တည်သောနတ်သည် သရဏဂုံ မတည်သော နတ်ထက်အသက်ရှည်ခြင်း၊
အဆင်းလှခြင်း၊ အခြွေအရံပေါများခြင်း၊ အပူဇော်ခံရခြင်း ထက်မြက်သော ဉာဏ်ပညာရှိခြင်း၊ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သော စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုရရှိခြင်း၊ ရွှေအဆင်းနှင့်တူသော အဆင်းရှိခြင်း၊
ချစ်ခင် နှစ်သက်မှုကို ရရှိခြင်း၊ ကျော်စောထင်ရှားခြင်း၊ အစိုးရခြင်း၊ နတ်တို့၏ အာရုံငါးပါးတွင် သာလွန်ခြင်း၊ မိမိ၏အလိုကို အခြားသော နတ်များကလိုက်လျောကြရခြင်း၊
မိမိ၏ အဆွေခင်ပွန်းများကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်
ထို့ကြောင့် … အလွန်အလုပ်များ၍ တရားအားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသောသူများသည် သရဏဂုံသုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။
ထိုသို့ ရွတ်ဆိုပွားများရခြင်း အကျိုးကြောင့် တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်တွင် နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရပါမည်
သံသရာ၌ ကျင်လည်ရလျှင်လည်း ဖေါ်ပြခဲ့သောအကျိုးတရားများကို ရရှိပါလိမ့်မည်
ထို့ကြောင့် သရဏဂုံ သုံးပါးကို သတိရတိုင်း အမှတ်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ရွတ်ဆိုပွားများကြပါဟု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်
Unicode Version >>>
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမွဲမပကျြရှတျဆိုပှားမြားသော ပုဂ်ဂိုလျသညျ အောကျပါ အကြိုးတရားမြားကို ရရှိနိုငျပါသညျ။
၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သှားလရော အရပျတိုငျး၌လေးစားမွတျနိုးခွငျးခံရမညျ
၂ ။ တိက်ခပညော။ ဉာဏျအလှနျထကျမွကျမညျ။
၃။ သဗ်ဗေ ဒဝေါနုဝတ်တန်တိ။ နတျတို့၏ စောငျ့ရှောကျခွငျးခံရမညျ
၄။ အမိတဘောဂံ လဘာမဟံ။ စီးပှားရေး အဆငျပွမေညျ
၅။ သုဝဏ်ဏဝဏ်ဏော သဗ်ဗတ်ထ။ ဖွဈလရောဘဝတိုငျး၌ ရုပျအဆငျးအလှနျလှပမညျ
၆။ ပဋိကန်တော ဘဝါမဟံ။ ဖွဈလရော ဘဝတိုငျး၌ လူခဈြလူခငျ အလှနျပေါမညျ
၇။ မိတ်တာနံ အစလော ဟောမိ။ ဖွဈလရောဘဝတိုငျး၌ မိတျကောငျးဆှကေောငျးခိုငျမွဲမညျ
၈။ ယသော အဗ်ဘုဂ်ဂတော မမံ။ ဖွဈလရော ဘဝတိုငျး၌ လူအမြား၏ လေးစားခွငျးခံရမညျ။ ကောငျးသောစကားမြားကိုသာပွောကွမညျ။
ကောငျးသတငျးမြားသာကြောဇောလိမျ့မညျဟု တိသရဏမထရျေ ရဟန်တာအရှငျမွတျက ဟောကွားခဲ့သညျ
ဒီဃနိကာယျ(နှာ-၃၃၂) သံယုတ်တနိကာယျ(နှာ-၃၄၁) တို့၌ လာသော သရဏံ၏အကြိုးတရားမြားမှာ
၁။ ယခုပစ်စုပ်ပနျဘဝ၌ ကရြောကျဆဲ ကရြောကျလတ်တံ့သော အန်တရာယျမြားရှိခွငျး၊ကွောကျရှံ့ခွငျး၊ ထိတျလနျ့ခွငျး၊ ကိုယျဆငျးရဲခွငျး၊ စိတျဆငျးရဲခွငျး၊ အပါယျလေးပါးသို့ လားရောကျရခွငျးစသညျ တို့ကို တားမွဈဖကျြဆီးပေးတတျ၏။
၂။နောငျဘဝ နတျပွညျသို့ ရောကျသညျ့အခါတှငျလညျး သရဏဂုံ တညျသောနတျသညျ သရဏဂုံ မတညျသော နတျထကျအသကျရှညျခွငျး၊
အဆငျးလှခွငျး၊ အခွှအေရံပေါမြားခွငျး၊ အပူဇျောခံရခွငျး ထကျမွကျသော ဉာဏျပညာရှိခွငျး၊ မနှိုငျးယှဉျနိုငျသော စညျးစိမျခမျြးသာကိုရရှိခွငျး၊ ရှအေဆငျးနှငျ့တူသော အဆငျးရှိခွငျး၊
ခဈြခငျ နှဈသကျမှုကို ရရှိခွငျး၊ ကြျောစောထငျရှားခွငျး၊ အစိုးရခွငျး၊ နတျတို့၏ အာရုံငါးပါးတှငျ သာလှနျခွငျး၊ မိမိ၏အလိုကို အခွားသော နတျမြားကလိုကျလြောကွရခွငျး၊
မိမိ၏ အဆှခေငျပှနျးမြားကို မညျသူကမြှ ပကျြစီးအောငျမပွုလုပျနိုငျခွငျးစသညျ့ အကြိုးတရားတို့ဖွငျ့ ပွညျ့စုံနိုငျပါသညျ
ထို့ကွောငျ့ … အလှနျအလုပျမြား၍ တရားအားထုတျရနျအတှကျ အခြိနျမရသောသူမြားသညျ သရဏဂုံသုံးပါးကို အမွဲမပွတျ ရှတျ ဆိုပှားမြားသငျ့ပါသညျ။
ထိုသို့ ရှတျဆိုပှားမြားရခွငျး အကြိုးကွောငျ့ တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျတှငျ နိဗ်ဗာနျကိုမကျြမှောကျပွုကွရပါမညျ
သံသရာ၌ ကငျြလညျရလြှငျလညျး ဖျေါပွခဲ့သောအကြိုးတရားမြားကို ရရှိပါလိမျ့မညျ
ထို့ကွောငျ့ သရဏဂုံ သုံးပါးကို သတိရတိုငျး အမှတျရတိုငျး စိတျထဲမှာ ရှတျဆိုပှားမြားကွပါဟု တိုကျတှနျးအပျပါသညျ
ကလေးများ အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်သည့် သတိမထားမိသော အန္တရာယ်များ
“ချောင်းထဲ ငါးရှာရာမှ ….ကံထူးစွာ ရှေးဟောင်း ရွှေရောင်ဘီးတွေ့”
“ခြင်ဆေးခွေမလို ! အင်မတန် အစွမ်းထက်တဲ့ ခြင်မလာအောင် ကာကွယ်တဲ့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်း”
လူတစ်ဦးလျှင် ဆင်းမ်ကတ်နှစ်ကတ်သာ မှတ်ပုံတင်နိုင်တော့မည်
ကျောက်ဆည်နည်းပညာကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင် အလှူခံပြီး ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်...
ဘယ်အရာမဆို ဈေးကြီးကြီးသာ သုံးတဲ့ မိုးဟေကိုက အူဝဲရဲ့ပွဲကို အမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့...
စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ …ကန့်ဘလူမြို့တွင် …လူခြောက်ကလေး… မွေးဖွား
မွနျမာငှကေပျြ ၁ သိနျးဝနျးကငျြပဲရှိမယျ့ အလနျးစား Panasonic ရဲ့ P90 စမတျဖုနျး